दबंग-३ मा करिनाको ठुम्का - VOICE OF NEPAL
दबंग-३ मा करिनाको ठुम्का
२७ माघ २०७५, आईतवार १६:२३ 107 ??? ???????
मुम्बई : बलिउड अभिनेत्री करिना कपुरको फिल्म दबंग-२ मा समवेश डान्स नम्बर ‘फेविकोल से’ निकै चर्चित भयो । करिना दबंग-३ मा पनि यस्तै डान्स नम्बरमा देखिने भएकी छन् ।
करिना अहिले उनको आफ्नै नयाँ प्रोजेक्टका कारण चर्चामा छिन् । उनी छिट्टै धर्मा प्रोडक्सनको नयाँ फिल्म ‘गुड न्युज’मा देखिँदै छिन् । यो फिल्ममा करिना र अक्षय कुमारका साथमा दिलजित दोसाँझ र कियारा आडवाणी पनि महत्वपूर्ण भूमिकामा देखिने छन् ।
हालै करिना निर्देशक रोहित सेट्टीलाई भेट्न पुगेकी थिइन् । त्यसैले करिना सेट्टीको फिल्म सूर्यवंशी वा गोलमाल-५ मा पनि देखिने अनुमान लगाइएको छ । करिना सेट्टीसँग भेटेपछि अरबाज खानलाई पनि भेट्न पुगेकी थिइन् । अरबाज दबंग सिरिजका निर्माता हुन् । उनी छिट्टै दबंग-३ को सुटिङ सुरु गर्दै छन् ।
यो फिल्मको निर्देशन डान्स आइकन प्रभुदेवाले गर्दैछन् । दबंग-३ को डान्स नम्बरको कोरियोग्राफी पनि प्रभुदेवाले नै गर्दैछन् । दबंग-३ मा अश्वनी माञ्जरेकर, सोनाक्षी सिन्हा र सलमान खानले खेल्ने पहिले नै तय भइसकेको छ । फिल्मको सुटिङ मार्चमा सुरु हुँदै छ । सेट बनाउने काम सकिँदै छ ।
दबंग सिरिजका दुवै फिल्ममा सलमान मुख्य भूमिकामा थिए । यो सिरिजको पहिलो फिल्ममा मलाइका अरोरा ‘मुन्नी बदनाम हुई’ गीतमा देखिएकी थिइन् भने दोस्रोमा करिना ‘फेविकोल से’ गीतमा थिइन् ।
नायिका साम्राज्ञिको समुन्द्री तटमा प्रेमी संगको तस्वीर बन्याे भाईरल
नेपाली सेलिब्रेटिलाई बुढेसकाल !
बालीको हट् वेदरमा यस्ती देखिईन् साम्राज्ञी !
“पातली”मा कला र करिश्माले मर्काए यसरि कम्मर
चलचित्र‘घर’ मा बेनिशाको बोल्ड अवतार
‘मुटुभित्र तिम्रो’ बोलको म्युजिक भिडियोमा अञ्जली अधिकारीको बोल्ड अवतार (भिडियो)
शिल्पाले दिइन् डिभोर्स, छबिले लेखे यस्तो स्टाटस !